ဓမ္မဂင်္ဂါ: ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗြိတိသျှစစ်သည်တော်(၄၀၀၀)အား ဗုဒ္ဒဂယာဘုရားဖူးစေလွှတ်မည်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗြိတိသျှစစ်သည်တော်(၄၀၀၀)အား ဗုဒ္ဒဂယာဘုရားဖူးစေလွှတ်မည်
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်၊ ရွြှေ့ပည်ကြီးမှာ စစ်ပွဲရဲ့ အနဋ္ဌာရုံတွေဆီ မြန်မာ့သားကောင်းစစ်သည်တော်တွေကို စစ်ချီစေလွှတ်တဲ့အချိန် ခရစ်ယန်အများစုကြီးစိုးရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံတော်ကြီးကတော့ သူတို့ရဲ့ စစ်သည်တော်တွေကို စစ်ပွဲရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံဆီကနေ ဆွဲထုတ်ပြီး တရားဘာဝနာပွားဖို့ စေလွှတ်လိုက်သတဲ့..။
အံ့သြစရာကောင်းတာက ဗြိတိသျှစစ်တပ်ကြီးထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်သည်တော်တွေ (၄၀၀၀)ကြီးများတောင် ရှိသတဲ့..။
''British Army to send 4,000 Buddhist troops to India for meditation to combat post-traumatic stress
By GIRIDHAR JHA'' ဆိုတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်.။
ဗန်ကောက်စံတော်ချိန် နံနက် ၁၀း၅၀ နာရီ
(Buddhist monks are worshiping in front of Mahabodhi Temple in Bodh Gaya. Photo by - Sonu Kishan.)
တစ်ကြိမ်မက ကြုံရတဲ့ စစ်ပွဲရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံတွေက ရဲရဲတောက်စစ်သားကြီးတွေကိုတောင် အလဲထိုးနိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်စစ်သားကြီးတွေလို အဆက်မပြတ်မမျှော်လင့်တဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ သူတွေအတွက်တော့
အရပ်ဘက်ကို ရောက်သည့်တိုင် စစ်ပွဲရဲ့ သွေးပျက်ဖွယ်ရာတွေကို မေ့ဖျောက်ဖြစ်ဖို့ သူတို့ခမျာခက်နေကြရှာတာပါ..။
PTSD လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါဆိုတာဟာ စိတ်ပညာဆိုင်ရာစာအုပ်ထူထူကြီးတွေနဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဂျာနယ်တွေမှာသာ တွေ့ရတဲ့ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဝေါဟာရတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ စစ်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံတိုင်း နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်သလို နိုင်ငံရဲ့ စစ်သည်တော်တွေကို ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအရပ်ရပ်က လွတ်မြောက်အောင် အဖြေရှာပေးနေရတဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ အစစ်အမှန်အအခြေအနေတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို အလေးအနက်ထားတဲ့ ဗြိတိသျှတပ်မတော်ဟာ ( အိန္ဒိယနိုင်ငံ) ဗီဟာခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့ကို ချဉ်းကပ်ပြီး စစ်ပန်းနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်သည်တော် (၄၀၀၀)ကို ဗုဒ္ဓဂယာမှာ ဘုရားဖူးရင်း သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ပန်းစိတ်ကျမှုတွေကို ဖြေဖျောက်ဖို့ မဟာဗောဓိညောင်ပင်မြတ်အောက်မှာ တရားဘာဝနာပွားများနိုင်ရေး စေလွှတ်ဖို့ အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့် ဇန်န၀ါရီလမှာ စစ်သည်တော်တွေ ၁၀၀-၁၅၀ အသုတ်လိုက် လာရောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာနဲ့ ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောရာမိဂဒါဝုန်မှာ တစ်ပတ်ကြာနေထိုင်ကာ အာဖဂန်နဲ့ အီရတ်လို စစ်မြေပြင်တွေက အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုစစ်ဆင်ရေးတွေမှာ အချိန်အတော်ကြာပင်ပန်းခဲ့သမျှ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်သည်တော်တွေအားလုံး ဘီစီခြောက်ရာစုက ဗုဒ္ဓအရှင် သစ္စာသိမြင်တော်မူရာ မဟာဗောဓိညောင်ပင်အောက်မှာ တရားဘာဝနာပွားများကြပါလိမ့်မယ်။
''သူတို့ က ၁၀၀-၁၅၀ အဖွဲ့ခွဲပြီး ရောက်လာကြမှာပါ၊ မဟာဗောဓိပင်အောက်မှာ တရားထိုင်ကြမယ်ပေါ့။ လာမယ့် ၂၀၁၃ နှစ်တစ်ခုလုံး အဆက်မပြတ်လာရောက်ကြမှာပါ။''
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီး ဆူနီလ် ကုမာရ် ပိန္တုက တနင်္လာနေ့က ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဗြိတိသျှစစ်သည်တော်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဂယာမှာ ခြောက်ရက်၊ မိဂဒါဝုန်မှာ တစ်ရက်နေထိုင်သွားကြမယ်လို့လည်း ၀န်ကြီးက ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 4:10 PM